My World: Underground Band တွေရဲ့ သမိုင်းသစ် ဂီတပွဲ
Underground Band တွေရဲ့ သမိုင်းသစ် ဂီတပွဲ
Posted by PhyoPhyo at Sunday, November 01, 2009 Labels: ဂီတပွဲအတွေ့အကြုံဆောင်းပါး, မြန်မာUnderground Band တွေရဲ့ သမိုင်းသစ် ဂီတပွဲ
ပိုစ့်အဟောင်းတစ်ခုပါ၊ အရင်က မိုင်စုဗူးမှာ တင်ထားဘူးတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာကပွဲဆိုတော့ တစ်နှစ်တောင်ကြာပြီ၊ အမှတ်တရ ဒီမှာတင်လိုက်ပါတယ်။ (မိုင်စုဘူးမှာ ယောက်ျားလေးပုံစံနဲ့ရေးခဲ့တာ)
ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့ ကန်တော်ကြီးမျှော်စင်ကျွန်းဘက်မှာ ပွဲတွေစီစဉ်လာကြပြီ။
Nine Planets က စီစဉ်တဲ့ Underground Band တွေရဲ့ 'သမိုင်းသစ်' အခွေသစ် ပရိုမိုးရှင်း ပွဲကို free show အဖြစ် အောက်တိုဘာ ၁၈ရက်နေ့က ကန်တော်ကြီး mini zoo မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။
(အဲဒီပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ထင်တာ မြင်တာလေးတွေ တချို့ ဘလောဂ့်ပရိသတ် အတွက်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သူတွေလဲ အမြင်မတူတာတွေရှိရင်လဲ ပြန်ပြီးပြောကြပေါ့ဗျာ။)
၀င်ဝင်ချင်း ဆိုင်းဘုတ်ကြီးမှာ ၅နာရီခွဲစမည်လို့ရေးထားတာစတွေ့တယ်။ အဖွဲ့တွေက Reason, Drive, Idiots, Wanted, ဋ, Temper Level VIII, Offekeys တွေပါ။ အဲဒီထဲမှာ ရတနာမိုင့် အမည်လဲတွေ့လိုက်တယ်။ သူလဲဆိုမယ်ပေါ့။ ညနေ ၅နာရီ ကျော်လာတော့ Nine Planets စာတမ်းပါ အကျီအနက်နဲ့လူငယ်လေးတွေ ဟိုသည် စုစု ၊ဝေးဝေးလှုပ်ရှားနေကြတာတွေ့ရပါပြီ။ ၅နာရီခွဲကာနီးတော့ ကား အကြီးကြီးတစ်စီး အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျွီခနဲဘရိတ်အုပ်၊ ဆင်းလာတော့ 'ဋ' က လင်းလွန်း ဆိုပဲ၊ တခြားအဖွဲ့က အနက်ရောင်လူငယ်တွေနဲ့ အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ ဒီလူငယ်လေးတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ မျှော်လင့်ချက်တစုံတရာနဲ့လင်းလက်တောက်ပလို့။ လှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ သီချင်းဆိုချင်နေကြပြီ။ ၅နာရီခွဲပြီ၊ ပွဲမစနိုင်သေးဘူး။ ဟိုတစ်စု သည်တစ်စု လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ပဲ၊ စင်ရှေ့မှာ ဘယ် ညာ ကင်မရာတွေ အသေချိန်ထားကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်တွေ ပိုပိုပြီး လှုပ်ရှားလာကြပြီး ၆နာရီကျော်လောက်မှာပွဲစပါတယ်။
Stage ရဲ့ အပြင်အဆင်က graffiti art စတိုင်လ် ပါ။ အနက်ရောင်နောက်ခံမှာ အဖြူရောင်မှုတ်ဆေးတွေပဲ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သုံးထားတယ်။
ပထမဆုံး Reason တွေတက်လာတယ်။ သူတို့သီချင်းတွေအပြင်မှာမကြားဖူးသေးပေမဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ သူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေဖတ်ထားဘူးတော့ Reason တွေကို ပရိသတ်က မျက်မှန်းတန်းမိကြတယ်။ အောင်လ .. အောင်လ လို့နှုတ်ဆက်သံတွေ ဟိုက ဒီက ကြားလိုက်ရတယ်။ သီချင်းလေးတွေ မဆိုးပါ။ ကောင်းပါတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။ ၃ပုဒ် ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ စတိုင်လ်အဖြစ် R .. E .. A .. S.. O.. N လို့ တစ်လုံးချင်းလို့ပြောသွားတယ်။
နောက် Drvie အဖွဲ့သားတွေအလှည့်။ မြန်မာ Underground Band တွေထဲမှာ သက်တမ်းအနုဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ သီချင်းလေးတွေကောင်းတယ်။ vocal သမား အသံပါဝါကောင်းတယ်။ မကောင်းတာက နဲနဲငြိမ်နေတာ။ “ပရိတ်သတ်တွေအရမ်းငြိမ်တာပဲ၊ အားရပါးရရှေ့ကိုတိုးပြီး အားပေးကြပါ” လို့ ဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်က ငြိမ်နေတော့ ပရိသတ်တွေက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။ စင်ရှေ့ကိုတော့ ကျေနပ်အောင် ပြေးလာကြပါတယ်။ ဒါက ကိစ္စတော့သိပ်မရှိပါ။ နောက်ပိုင်း ပွဲတွေဆိုတာများလာရင် ပွဲထိန်းနိုင်သွားမှာပါ။
နောက်တစ်ဖွဲ့က Idiots ။ သီချင်းသစ်တွေအပြင် ပရိသတ်သိပြီးသား အရင်သီချင်းအဟောင်းတွေပါဆိုသွားတယ်။ vocalသမား တွတ်ပီက အသံပါဝါပိုကောင်းလာပေမဲ့ အ၀င်အထွက်တွေမှာ အခုထိ ခပ်ပါးပါးလွဲနေတုန်းပဲ။ ဒါကို သတိထားနေရတုန်းပဲ။ အသံမကောင်းမှာကို ကြောက်ပြီး အရမ်းဂရုစိုက်ဆိုနေတော့ သူ့ခမြာပင်ပမ်းနေရှာတယ်။ ရာသီဥတုကလဲ ပူလွန်းတယ်။ ဒီတော့ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်ရော ဆိုတဲ့တီးတဲ့သူတွေပါ ပင်ပမ်းနေကြတယ်။ မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ ထွက်တဲ့ ပိုးစိမ်းကောင်၊ ပုရစ်တွေက ဆလိုက်မီးရောင်တွေကြောင့် ပိုပြီးထကြွသောင်းကျန်းနေလိုက်တာများ၊ စင်ပေါ်က တခါတခါ လွှတ်လိုက်တဲ့ ရေခဲငွေ့တွေတောင် ပိုးကောင်တွေကိုတိုးမပေါက်ဘူး။ ဆိုနေတဲ့သူရဲ့ ပါးစပ်ထဲပိုးကောင်ဝင်သွားမှဖြင့်လို့ မဆီမဆိုင်တွေးပူလိုက်မိသေးတယ်။ နောက် တွတ်ပီကပြောတယ်။ ဒီပွဲအတွက် ၅ပတ်လောက်ရှိပြီ ကြိုပြီးစီစဉ်နေခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်း နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူတို့သီချင်းတစ်ပုဒ်စပ်ထားတယ်။ Nine Planets အဖွဲ့သားတွေ အားလုံးစုပြီး ဆိုကြမယ်တဲ့၊ ဒီတော့ တခြားအဖွဲ့သားတွေကို ခေါ်တယ်၊
Drive က သားကြီး၊ Reason က အောင်လ၊ Wanted က ဖော်ကာ၊ 'ဋ' က လင်းလွန်း တို့ပါ အတူတူဆိုကြတယ်။
လူငယ်လေးတွေရဲ့ ကူညီချင်တဲ့စိတ်၊ အရာရာကို တတ်နိုင်သလောက် ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းလိုတဲ့စိတ်တွေ နဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကပါ ငြိမ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ကြတယ်။ သီချင်းလေးက ကောင်းပါတယ်။ ဆိုနေတဲ့လူငယ်လေးတွေရော ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ သွေးပျက်ခြောက်ခြားစရာ အတိတ်အရိပ်တွေ ရုန်းကန်ထကြွလို့ မျက်နှာလေးတွေ ငိုင်တွေကုန်ကြတယ်။ အဖွဲ့သားတွေအားလုံး အချင်းချင်း ညီညီညွတ်ညွတ်ရှိကြတာကိုမြင်တွေ့ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလှတယ်။
နောက်တော့ ရတနာမိုင်အလှည့်ပါ။ ရတနာမိုင်က သူမရဲ့မေမေနဲ့ အတူတူဆိုထားတဲ့သီချင်းကိုပဲ ပထမဆုံးဆိုတယ်။ 'ငါ့ကိုချစ်ရင် ဖုန်းမဆက်ပါနဲ့၊ ငါ့အဖေသိမှာ ကြောက်လို့ပါကွဲ့' တဲ့။
Nine Planet နဲ့တွဲပြီး သူမ ထွက်မဲ့အခွေရှိတယ် လို့ပြောတယ်။ အဲဒီအခွေသစ်မှာပါမဲ့ သီချင်းတွေလဲဆိုသွားပါတယ်။ Idiots က တွတ်ပီက တစ်ပုဒ် ၀င်တီးပေးတယ်၊ ရတနာမိုင် က အရည်အသွေးရှိသူလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာတွေလွဲနေလဲ မသိပါ၊ အတီးနဲ့အဆို ကီးမတူသလို နားထောင်ရတာ အရသာမတွေ့ဘူး၊ အစ အဆုံးကို လွဲပြီး ဆိုသွားတယ်လို့ ထင်တယ်။
ရတနာမိုင်ရဲ့ဟန်က တချက်တချက် ခင်ဘုန်းရဲ့ဟန် လိုလို။
ရတနာမိုင်ပြီးတော့ Wanted အဖွဲ့ပါ။ Wanted တွေကတော့ သက်တမ်းရင့် မြန်မာ Underground Band မဟုတ်လား။
သက်တမ်းရင့်တယ်ဆိုတာကို ပိုပြီးသေချာသွားစေတာက vocal ဖော်ကာ ရဲ့ performance ကြောင့်ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ 'ဟုတ်ကဲ့' သီချင်းကလဲ သဘောကျစရာပါ။ ပရိသတ်တွေကို အင်မတန်ထိန်းနိုင်တယ်။ ဟန်လုပ်ထိန်းချုပ်မထားတဲ့ သူ့အပြောအဆို နဲ့သူ့ပုံစံကပဲ ပရိသတ်နဲ့ အစပ်အဟပ်တည့်နေတော့တယ်။ Underground Band တွေဆိုတာက ကိုယ့်ဂစ်တာကို ကိုင် တက်လာကြတဲ့ ဂီတသမားတွေ၊ ဒီတခေါက်တော့ ဂစ်တာတွေမှာ Nine Planets စာတမ်း တွေ့ရတော့ Nine Planets ပိုင် ဂစ်တာတွေများလားတွေးမိသေးတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Nine Planets က ဆရာကြီးဆိုသူတော့ ဖော်ကာ အလှည့်ရောက်မှာ ကို ကြောက်နေရှာမယ်။ ဖော်ကာက ဂစ်တာကို တီးလိုက်၊ ပစ်ချလိုက် ၊တခါ ကောက်တီးလိုက်၊ ပြန်ပြီးပစ်ချလိုက်နဲ့အလုပ်ရှုပ်တတ်သူကိုး၊
သီချင်းတွေက Wanted ရဲ့ မဆိုမဖြစ်သီချင်း "နင် ငါ့ကို မုန်းချင်မုန်းပါဟေ့၊ ငါ့ကို ဖြတ်ချင်ဖြတ်သွားဟေ့၊ ငါ့ဂီတ ကို မထိခိုက်နဲ့" လို့ အော်ဟစ်သီကြူးသွားတယ်။
လူငယ်တွေကလဲ အားပါးတရ သံပြိုင်လိုက်ဆိုကြတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ Wanted လို့ဖြစ်လာစေတဲ့သီချင်းတပုဒ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ စင်ရှေ့မှာလဲ အနက်ရောင်လူငယ်တွေ ဖော်ကာနဲ့အတူ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲကုန်ကြတော့တယ်။ သီချင်းတွေမှာ အမှားအယွင်းမရှိ သီဆိုသွားနိုင်တဲ့ ဖော်ကာ ဖြစ်နေပြီ။ သူ့ရဲ့အသံကတော့ အရင်ကလိုပဲ ခပ်စွာစွာပုံစံမျိုးပဲ။
Wanted ပြီးတော့ သူတို့နဲ့သက်တမ်းတူလို့ ပြောနိုင်တဲ့ 'ဋ' ပါ။ 'ဋ' တွေကတော့ တစ်ဖွဲ့လုံး performance ကောင်းကြတယ်။ ဆံပင်တွေက အားလုံးအရှည်၊ vocal လင်းလွန်းကအစ ဂစ်တာသမားတွေပါ ဆံပင်တွေ အရှည်ကြီး၊ ဟန်တွေက စည်းချက်ကျကျ၊ ခပ်ပြင်းပြင်း၊ ရောခ့်သမားတွေအကြိုက်ဆုံးအနေအထား၊ ၀မ်းခေါင်းသံကြီးတွေနဲ့ အော်ဟစ်မြည်ကြွေးလို့၊ ပရိသတ်ကလဲ လိုက်အော်လို့၊
စင်ပေါ်ကခုန် အောက်ကခုန်နဲ့ 'ဋ' တွေမပါရင် ပွဲမစည်ဘူးလို့တောင်ပြောနိုင်ဦးမယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်အစာမကြေမှုတွေကို 'ဋ' တွေက ခဏတာဖြေလျှော့ပေးနိုင်လို့ လူငယ်တွေကျေနပ်တယ်၊
သူ့ရဲ့ ပရိသတ် တွေ လက်ညှိုးထောင်ပြပါ လို့ လင်းလွန်းက တောင်းဆိုလိုက်တယ်၊ ပရိသတ်ထဲမှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ Pal အဖွဲ့က ဂစ်တာသမားက အစ မိန်းကလေးငယ်ငယ်တွေအဆုံး အနက်ရောင်လူငယ်တွေများများစားစား အလုအယက် လက်ညှိုးထောင်ကြတယ်။ လင်းလွန်း ကျေနပ်သွားတယ်။ '-'ရမ်းမိုက်တယ်၊ '-'ရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြောသွားရှာတယ်။
နောက် Round တလှည့်ပြန်ဆိုကြတော့ Reason, Drive, Idiots, ရတနာမိုင် နဲ့ Wanted တို့ပါ ထပ်ပြီး ဆိုသွားကြတယ်။ 'ဋ' ကတော့ ပြန်မပါလာတော့ပါဘူး။ အစအဆုံး လုံးဝပါမလာတာက Temper Level VIII နဲ့ Offkeys တို့ပါ။ နောက်ဆုံး Wanted အဖွဲ့နဲ့ပွဲကိုပိတ်တယ်။ သူ့ရဲ့ 'အရက်သမား' သီချင်းကို လူငယ်တွေပါမက လူကြီးတွေပါ ခေါင်းလှုပ်ခြေလှုပ် စည်းချက်လိုက်ကြတယ်။ စာသားကလဲ သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်၊ အရက်သမားသိက္ခာမကျရအောင် ခြေလှမ်းကိုထိန်းနေတဲ့စာသားက လူတွေကို ပြုံးမိစေတယ်။ အဆုံးသတ်ခါနီးမှာ ပရိသတ်လဲမောနေပြီ၊ ဖော်ကာက မေးတယ်။ 'ပြန်ချင်ကြပြီလား၊ မပြန်ချင်သေးရင်ဆက်ဆိုမယ်၊ ပြန်ချင်ပြီဆိုရင် ဆက်မဆိုတော့ဘူး' တဲ့၊ ပရိသတ်တချို့ကလဲ ဟန်မဆောင်ကြဘူး။ 'ပြန်ချင်ပြီ' လို့ပြောကြတယ်။ ဒီတော့လဲ သူက the Last လို့ထအော်လိုက်တယ်။ သီချင်းစတော့ .. အတီးစ၀င်လာကတည်းက Nirvana သီချင်းမှန်းရိပ်မိလိုက်တဲ့ လူငယ်တွေက Nirvana ဆိုပြီးအော်ကြတယ်၊ မူရင်းအတိုင်းပဲဆိုသွားပါတယ်။ performance စွမ်းပကားကိုတော့ ၀ါသနာအရ ထုတ်ပြဆဲပါ။ ဂစ်တာကိုတီးနေရင်း နောက်ကို ပစ်လွှဲလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းရှည်ထားတဲ့လွယ်ကြိုးကြောင့် ဂစ်တာက နောက်ကိုအရောက်မှာ ပခုံးက လျှောကျသွားတော့တယ်၊ ဒါကို အင်မတန်ပါးနပ်လှတဲ့ ဖော်ကာက ဆိုနေရင်းက ဟန်မပျက် လွယ်ကြိုးကိုအောက်ထိ အသာလျှောချရင်း ဂစ်တာကိုပစ်ချလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ဘေးဘက်ထွက်ရပ်လိုက်ရင်း ဆက်ဆိုနေတယ်၊ နောက်တော့ မိုက် ကို စတန်းက ဖြုတ်ယူလိုက်ပြီး ဂစ်တာသမား ကို ပေးဆိုပြန်ရော၊ နောက်မှာ ဂစ်တာ backing တီးပေးထားမဲ့သူသပ်သပ်ရှိနေရင် ပိုအဆင်ပြေနိုင်မှာပါ၊ အခုတော့ ဂစ်တာသမား က အတီးကို ဂရုစိုက်ရတဲ့အထဲ ဖော်ကာက သူမောနေလို့ မဆိုနိုင်တိုင်း သွားဆိုခိုင်းတော့ ဂစ်တာသမားခမြာ ပျာနေရှာတာပေါ့။ သီချင်းလဲ ဆုံးရော'ပြန်တော့' လို့ ဖော်ကာကပဲ ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်ရင်း ပွဲသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်နဲနေတာလွဲလို့ အေးအေးဆေးဆေးပြီးသွားတဲ့ပွဲပါပဲ။
ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေ 'စည်းလုံးကြပါစေ။ အောင်မြင်ကြပါစေ' ချီးမြှောက်ဆုတောင်းပေးကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ တွန့်ဆုတ်မနေသင့်ဘူးမဟုတ်လား။
သမိုင်းသစ် အယ်လ်ဘမ်ရောင်းရငွေကို လေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို အားလုံးလှူမှာဆိုတော့ မူရင်းခွေကို ၀ယ်ကြဖို့လဲ တိုက်တွန်းချင်တယ်ဗျ။
မိုင်စုဘူးက comment တွေ
ရဘူး ရဘူး . . . . . ကော်ပီကူးပစ်မှာပဲ . . . . . နောက်တစ်ခါ သွားရင် . . . video camera လေးနဲ့ပါ ရိုက်ခဲ့ပါ . . အမြည်း ကြည့်ရတာပေါ့ . . . ဓါတ်ပုံတွေ တင်ပေးရမလား အဲဒီလို အရေးကောင်းတဲ့ အစ်ကိုကြီး တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့် ကောင်မလေး ငါးယောက်လောက် ရပါစေ . . ရှဉ့်
ပုံတွေကို connection ကောင်းမှ တင်ပေးထားပါမယ်။ ခုတော့... ဟုတ်ကဲ့... ဟုတ်ကဲ့...ဟုတ်ကဲ့
QUALITY I really like this blog, now im not 1 for adding links in my replies but I feel this isagreat exception, this reminds me of some similar stuff by graffiti artist “SER” at http://www.hire-a-graffiti-artist.co.uk hisagreat graffiti artist form London and has many different styles. There areafew more good graffiti artists on the site called Graffiti Kings that graffiti bedrooms, night clubs & everything else “wink wink” lol.
အော်တာ သွက်လတ် said...
သူရဲကောင်းတွေ နဲ့ ဆိုးသွမ်းလှတဲ့သူတွေ
နှင်းကျတဲ့နေ့က ကျွန်မ ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်
နံရံဆေးခြယ်အနုပညာ သို့မဟုတ် Graffiti Art